Rehefa manome antony an-jatony ny fahasimbana sy ny fitomaniana ny fiainana dia asehoy fiainana fa misy antony an-tapitrisany mitsiky sy ihomehezana. Mahereza hatrany. - Anony - Quote Pedia
Tsy milamina ny fiainana. Ho be dia be ny antony handrava, hahatsiaro sy potika ary mitomany. Na izany aza, alao antoka fa tsy mamela ny tenanao hitoetra ao anaty alahelo sy fahoriana ianao.
Ny fiainana dia hanome antony zato hanesorana anao, hahatsapa ho toy ny namoy ny fanananao rehetra ianao, nefa ataovy izay hahazoana antoka fa miakatra lavitra noho izany ianao!
Tsy tokony ho jerena fotsiny ny zava-dratsy iainan'ny fiainana, fa tokony hifantohana ihany koa amin'ireo zavatra tsara nanjo anao. Raha mijery manodidina ianao dia hahita antony maro hitsiky sy hihomehy ihany koa! Safidio izy ireo fa aza manasongadina ny alahelony.
Ny tsy fitoviana kely amin'ny fahitantsika dia afaka manao fahagagana amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe ho antsika ny mitoetra mafy. Ny fiainany dia hanana fihenam-bava ho azy.
Mety hisy fotoana hahatsapanao fa tapaka tanteraka, ary avy eo dia hisy ny toe-javatra izay hahatsapanao ho toy ny mitsangana, ary manao soa, mitsiky ary mampihomehy ny fonao.
Sambatra mifantoka amin'ny lafy tsarany, ary miezaha hamerina ny tenanao amin'ny lafy ratsy. Raha vantany vao manao izany ianao, dia ho hitanao fa toa milamindamina kokoa ny fiainana noho izay noheverinao fa ho izany!
Mahereza, ary ataovy tsy hiasa. Ovay ny hevitrao mandrosoa kely dia ho hitanao ny zava-tsoa mitranga manodidina anao.
Mahereza amin'ny teny avoaka
Mahereza sary sokitra
Miorina amin'ny fomba matanjaka
Hevitra manan-danja momba ny fiainana
Teny fanentanam-panahy momba ny fiainana sy fahasambarana
Teny momba ny hoe matanjaka sy mirary
Mijanona ho marika paika
Mijanona ho marika paika momba ny fiainana
Mijanona amin'ny fomba matanjaka
Mafy sy matanjato
Fanamafisana ny fiainana matanjaka
Fanamarihana mafy momba ny fiainana
Quotes mafy indrindra
Miezaha ho mahery vaika
Vantany vao tsapanao fa voaroan'ny olon-kafa ianao, dia aza manelingelina azy ireo intsony. - Anonyme
Vantany vao tsapanao fa voaroan'ny olon-kafa ianao, dia aza manelingelina azy ireo intsony. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Mianara milamina amin'ny olona tsy mahalala ny lafiny ataonao ny tantara. Tsy manana porofo ho an'ny rehetra ianao. - Anonyme
Maneho ny vokatry ny asa tsara ataontsika mandrakariva isika. Vao mainka hiharatsy ny asa ratsy noho ny…
Aspire hanome aingam-panahy alohan'ny hahataperan'ny fotoana. - Anonyme
Manome lesona be dia be antsika ny fiainana rehefa mandroso isika. Misy fisehoan-javatra eo amin'ny fiainana izay mahatonga…
Fantaro ny tsy fitovian'ny faharetana sy ny fandaniam-potoana. - Anonyme
Tsy mitranga araka izay tianao ny zava-mitranga. Tsy nitranga akory amin'ny fotoana itadiavanao azy ireo izany…
Raha afaka mijanona ho tsara ianao amin'ny toe-javatra ratsy, dia mandresy ianao. - Teny nindramina tsy fantatra anarana: